HSC series Chain Hoist သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုစုပ်ယူပြီးနောက် HSZ အမျိုးအစားကွင်းဆက်လွှင့်ထူခြင်းကိုအခြေခံသည်။ HSZ ကွင်းဆက်လွှင့်ထူခြင်း၏ရိုးရာဝိသေသလက္ခဏာများအပြင်၎င်းသည်လက်ဖြင့်ဆွဲအားပိုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ပိုလုံခြုံ၊ ပိုလှပ။ ပိုအသုံးဝင်သည်။
မော်ဒယ် HSZ-C0.5 HSZ-C1 HSZ-C1.5 HSZ-C2 HSZ-C3 HSZ-C5 HSZ-C10
စွမ်းရည် (t) ၀.၅ 1 ၁.၅23510
Standard Lift (မီတာ) ၂.၅ ၂.၅ ၂.၅3333
စမ်းသပ်မှုဝန် (T) ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း ၀.၇၅ ၁.၅ ၂.၂၅3၄.၅ ၇.၅ ၁၂.၅
Headroom (အနီးကပ်ဆွဲထားသည်) hmin (mm) 255 326 368 444 486 618 700
ဝန်အပြည့်တင်ရန်ဆွဲကြိုး (N) 221 304 343 314 343 383 392
ကျရောက်သောဝန်ကွင်းဆက်အမှတ် 1 1 12224
ဆွဲကြိုးအချင်း (မီလီမီတာ)66 868 10 10
A 125 147 180 147 183 215 ၃၆၀.၅
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 8 10 16 14 24 36 68
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 10 13 20 17 28 45 83
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (L*W*H) (cm) ၂၈*၂၁*၁၇ ၃၀*၂၄*၁၈ ၃၄*၂၉*၁၉ ၃၃*၂၅*၁၉ ၃၈*၃၀*၂၀ ၄၅*၃၅*၂၄ ၆၂*၅၀*၂၈
အပိုအလေးချိန်မီတာအပိုဓာတ်လှေကား (ကီလိုဂရမ်) ၁.၇ ၁.၇ ၂.၃ ၂.၅ ၃.၇ ၅.၃ ၉.၇
၁။ ဤအမျိုးအစားသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးလက်ဖြင့်ဆွဲကြိုးဖြင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများနှင့်ပါဝါမရှိသည့်တိုင်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသည့်ကိရိယာငယ်များနှင့်ဆွဲဆန့်ရန်သင့်တော်သည်။
၂။ ကွင်းဆက်စက်သီးဘလောက်သည်အနိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စိတ်ချရသော၊ လုံခြုံမှုအတွက်သုံးသည်။
၁။Gear: standard နိုင်ငံတကာဂီယာသံမဏိသည်သာမန် chain pulley block ကဲ့သို့ wear-resisting degree ထက်နှစ်ဆပိုရှည်သည်၊ လည်ပတ်မှုသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးလက်ဆွဲအားသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
2. Chain: ကွင်းဆက်၏ပိုမိုမြင့်မားသောခွန်အား; ရုတ်တရက်အဝလွန်အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း၊ သာမာန်ကွင်းဆက်စက်သီးဘလောက်ကိုဒေါင်လိုက်အောက်ဆွဲဆွဲခြင်းအားပြောင်းခြင်း၊ ပိုကျယ်ပြန့်ရန်အံကိုက်ဖြစ်စေသည်။
3. ချိတ်: မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုအလုံအလောက်ပစ္စည်းချိတ်, မြင့်မားသောလုံခြုံရေး coefficient; ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များမပြတ်တောက်စေရန်သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းသစ်ကိုချိတ်ခေါင်း၌သုံးသည်
၄ င်းကိုကန့်သတ်ရန်၊ ကွင်းဆက်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သတ်မှတ်ထားသောအကန့်အသတ်အစိတ်အပိုင်းကိုသုံးပါ။
၅။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအဆင့်မြင့်အလွိုင်းသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိသည်။
၆။ ဘောင်ခတ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းအနည်းငယ်ပိုလှပခြင်း၊ အလေးချိန်နည်းခြင်းနှင့်သေးငယ်ခြင်း
၇။ Plastic Plating: အတွင်းအပြင်အပြင်ဘက်တွင်အဆင့်မြင့် plastic plating နည်းပညာကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ပြီးနောက်အသစ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။
ယခင်: Hand Pallet Truck
နောက်တစ်ခု: HSZ ကွင်းဆက်ပိတ်ဆို့ခြင်း
လက်စွဲ Pulley Block
လက်စွဲ Pulley Hoist
Lever Puller ဖြစ်သည်, Manual Lever Chain Hoist, Bannon လျှပ်စစ် hoist, အသေးစားလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကြိုး, Jet 1.5 Ton Chain Hoist, လျှပ်စစ် Lever Hoist,